Ibi úgwù abaghị uru | Apg29
Ibi úgwù abaghị uru
Ibi úgwù ike mụọ unu ọzọ, ma ọ pụrụ ịbụ na Jizọs Kraịst.
Nke a na izu ụka, e kpebiri na Center Party nzute na ha ga na-arụ ọrụ iji machibido úgwù nke ụmụ nwoke na-adịghị mere iji gwọọ ọrịa.
Galeshia 6:15. N'ihi na Kraịst Jizọs abughi ibi úgwù ma ọ Biekwanụ dịghị ojiji, ma ihe e kere ọhụrụ.
The Center kpebiri na ya ọzọ ogbako na ha chọrọ iwu machibidoro úgwù nke ụmụ nwoke. Party isi adọ aka ná ntị na ọ ga-aghọta ka otu chọrọ iji machibido okpukpe ndị Juu na Islam.
Ma dị ka Bible, otú ibi úgwù abaghị uru. Ọ nwere ike na-adịghị azọpụta. The naanị otu onye nwere ike ịzọpụta bụ Jizọs Kraịst.
The Center kpebiri na ukpan
The party na-edu ndú, achọghị nke a, na Center Party ndú Annie Lööf kwuru mgbe e mesịrị na ọ kwara ụta maka mkpebi.
Ugbu a, bịa ajụjụ, na-na zuru oke Party, nke e nzute na a izu ole na ole. Ọ bụ Anna af Sillen na Maria Gilstig si Sörmland n'okpuru a ngagharị iji tie iwu megide nwoke úgwù ma ọ bụ iji gwọọ ọrịa.
N'ezie, ndị Juu na ndị Muslim iche iche iwe iwe, nke m nwere ike ịghọta, ma dị ka Bible abụghị úgwù ịzọpụta ma banyere gị bụ ihe e kere ọhụrụ na Christ ma ọ bụ.
Ibi úgwù na-azọpụta bụghị
Ibi úgwù ike mụọ unu ọzọ, ma ọ pụrụ ịbụ na Jizọs Kraịst. Ọ bụ ya ga-anabata ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a zọpụta.
1Co 7:19. Ibi Úgwù pụtara ihe ọ bụla, na-ebighị úgwù apụtaghị ihe ọ bụla, kama ka i debe iwu Chineke.
Galeshia 5: 6 N'ihi na Kraịst Jizọs abughi ibi úgwù ma ọ apị ihe ọ bụla, ma okwukwe na-arụ ọrụ site n'ịhụnanya.
Galeshia 5:11. M, umu-nnam, ma ọ bụrụ na m ka na-ekwusa ibi úgwù, gịnị mere na-ata ahụhụ na m ka na-akpagbu ya? Mgbe ahụ, ọ ga-iwe nke obe pụọ.
Galeshia 6:12. All ndị chọrọ nwere ezi n'anụ ahụ, ha amanye gị úgwù, n'ihi na ha ga-akpagbu n'ihi obe Kraist n'ihi.
Ndị Kọlọsi 2:11. Na ya na ị na-na-úgwù na ibi úgwù abụghị eji aka me, ma na Kraịst úgwù, mgbe ahụ ọ ga-akwụsị anụ mmehie ahụ.
Anyị na-ahụ na Bible kpọmkwem-ekwu na ị pụghị ịzọpụta site ibi úgwù, ma nzọpụta na-adabere ma ọ bụrụ na i nwere Jesus ma ọ bụ.
ibi úgwù njehie
Ma, e nwere ndị mmadụ na Bible, bụ ndị chọrọ ịmanye úgwù kwere ekwe. N'ihi na ha na-ekwu na ha nwere ike-azọpụta ma ọ bụghị. I nwere ike na-agụ na Ọrụ 15: 1-2:
1. Na ụfọdụ ndị ikom wee si na Judia na kụziiri ụmụnna: Ọ bụrụ na ị na-adịghị ka úgwù dị ka omenala si n'aka Mozis, unu nwere ike-azọpụta.
2. Mgbe ahụ, e nwere ọgba a ojuju, na Pọl na Banabas nwetara n'ime a oké njọ esemokwu ha. Ha kpebiri na Pọl na Banabas na ụfọdụ ndị ọzọ n'ime ha na-aga ruo ndịozi na ndị okenye na Jerusalem banyere nke a na-ese okwu nke.
Rịba ama na ọ na-ekwu "omenala nke Moses" , ọ bụghị "iwu nke Moses ..." Mgbe Ndịozi agbagowo Jerusalem, ha kpebiri, ha na Mmụọ Nsọ:
Ọrụ 15: 28-29. Maka Mmụọ Nsọ na anyị kpebiri na ha agaghị dina n'elu unu dịghị ihe ibu arọ, ma e wezụga nke a dị mkpa:
N'ihi ya, anyị na-ahụ na ọ bụ a heresy na a ga-úgwù ka a ga-azoputa. Nanị ụzọ na-azọpụta bụ ịnabata Jizọs Kraịst ma kwere na ya.
The arụmụka na-ekwesịghị ileghara anya
Ma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị arụmụka na Sweden nwere ike ịbụ ya mere adịghị njọ. Ma eleghị anya, oge ọzọ ha na-aga megide ezigbo nzọpụta oké mkpa ihe, dị ka na ị nwere ike kwere na Jizọs, ma ọ bụ na i nwere ike ịkụziri ụmụaka ka ha kwere na Jizọs, mgbe ahụ, ọ na-aghọ n'ezie ize ndụ.
Ka anyị kpee ekpere maka Sweden na ndị ya. Ka anyị kpee ekpere maka anyị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mere na ha adịghị eme mkpebi na-aga megide Jizọs na Bible. Ka anyị kpee ekpere na Chineke ga-ezipụ ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi ya dị ka onye àmà na-agbasa ozi ọma banyere Jizọs mere na ndị mmadụ ga-enwe ike inweta ya mere na ha na-azọpụta.